Ogige National Irish & Ubi ndị Japan - IntoKildare
The Irish National Stud bụ ebe a na -azụlite ịnyịnya nke ọma na Tully, County Kildare, Ireland. Ụlọ nke ịnyịnya kacha mma & ubi Japan mara mma.
Ọ nweghị ebe dị mma na -anọchite anya ihe niile dị mma gbasara County Kildare, obi na -akụ nke ụlọ ọrụ zuru oke nke Ireland, karịa Irish National Stud & Gardens, ihe pụrụ iche nke mara mma eke mara mma nke nwere ụfọdụ ịnyịnya ndị mara mma na ubi mara mma. ebe ọ bụla n'ụwa na ahụmịhe Irish Racehorse, ụwa mbụ na -adọrọ mmasị ọhụrụ maka 2021.
Mepere site na Febụwarị ruo Disemba, Irish National Stud & Gardens na -enye onye ọ bụla ihe. Site na njem nlegharị anya kwa ụbọchị nke ugbo Stud, ogige ndị Japan ama ama, ogige St Fiachra ọhịa na ebe obibi nke akụkọ mgbe ochie-ụfọdụ n'ime ndị na-agba ịnyịnya ama ama na Ireland (Faugheen, anụ ehi ma ọ bụ salmon, Hurricane Fly, King Kicking, Hardy Eustace na Rite Of Ngabiga niile nọ na ezumike nka na Stud).
Outdoors, Onye na-agba ịnyịnya Kildare, Nwee ezumike ezinụlọ, Kildare
Nke a, Obodo Kildare, R51 KX25, Ireland.
Mọnde ruo Sọnde: 10am ruo 6pm, nnabata ikpeazụ 5pm.
Gaa na webụsaịtị maka oge mmeghe site na Nọvemba ruo Jenụwarị.